संस्कारको क्षेत्र जति फराकिलो छ, उत्ति नै महत्वपूर्ण पनि छ—२
शनिबार, असोज ३०, २०७८ ०६:१०:३२ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
अमेरिकाको सोह्रौ राष्ट्रपति तथा दासप्रथाका उन्मूलनकर्ता अब्राहम लिङ्कनले कठोर मेहनतपछि बीस वर्षसम्म वकिलको रूपमा वकालत गरे । उनको बीस वर्षको वकालतको समय उनको लागि सफल भएन किनभने उनी पारिश्रमिकबिना गरीबहरूको मुद्धा लड्ने गर्थे र झुठो मुद्धाको पक्षमा कहिल्यै वकालत गर्दैनथे । उनी गरीबहरूको मुद्धाको पक्षमा वकालत गर्न पाउँदा मानसिक सन्तुष्टि मिल्छ भन्थे । एकपटक अब्राहम् लिङ्कन र उनको सहयोगी मिलेर एकजना मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलाको जमिन कब्जा गरेका बेइमानीको विरुद्ध मुद्धा लडे । अदालतमा जम्मा १५ मिनेटको बहसपछि अदालतले ती महिलाको पक्षमा फैसला सुनायो र त्यस बेइमानी व्यक्तिलाई सजाय पनि तोक्यो । उनको सहयोगी वकिलले अदालतको फैसलापछि त्यस महिलाको भार्ईसँग पूरा पारिश्रमिक लिएर खुुसी हुँदै अब्राहम् लिङ्कनलाई आधा हिस्सा लिन आग्रह गरे । ती महिलाले न्याय पाएकोले खुसी भएर हाम्रो पारिश्रमिक दिएको सुनाउँदै आधा हिस्सा आफूले राखे । जवाफमा लिङ्कनले भने ‘ती महिला खुसी भएपनि म खुसी छैन । यो पैसा एकजना बिचरा रोगी महिलाको हो, म यस्तो पैसा लिनुको सट्टा भोकै मर्न मन्जुर गर्छु । तिम्रो आफ्नो हिस्सा लिन्छौ भने लेऊ तर मेरो हिस्साको पैसा तुरुन्त फर्काउनु ।’ लिङ्कनको कुरा सुनेर वकिल साथीले आफ्नो आधा हिस्सा लिएर आधा हिस्सा फर्काइदियो । अब्राहम् लिङ्कनले आफू समस्या नै समस्याको जीवन बिताइरहेको भएतापनि मनमा लोभ नलिएर मानवता देखाए तर वकिल साथी सम्भ्रान्त भएर पनि मानवता राख्न सकेन, त्याग गर्न तयार भएन ।
हामी दरिद्र मानसिकताको डाक्टरबाट हुने स्वास्थ्य उपचारमा कसरी सेवाको आशा गर्न सक्छौं ? उसले हाम्रो ज्यान बचाउँछ भनेर कसरी भरोसा गर्न सक्छौं ? डाक्रको कमाउ प्रवृत्तिका कारण उसको उपचार शैली बिरामीलाई ठग्ने किसिमको बनिसकेको हुन्छ । त्यस डाक्टरको निम्ति बिरामीको शरीर परीक्षणको औजार बन्छ । उसले बिरामीका आफन्तको पैसा खर्च गराउने नीति लिएको हुन्छ । यो डाक्टरको दरिद्र मानसिकताको उपज हो । त्यस्तै दरिद्र मानसिकताका कारण इन्जिनियर कमिशनमा, नेता, मन्त्री भ्रष्टाचारमा, कर्मचारी घुसखोरीमा, व्यापारी बेइमानीमा, उद्योगपति ठग्नमा, खेलाडी सम्झौतामा पुग्छन् र सबका सब लालची बन्छन् । मानिस धनको सदुपयोग भन्दा पनि जम्मा गर्नेतिर लाग्छन् । उनीहरू धेरैमाथि धेरै धन जम्मा गर्ने लालची बन्छन् । उनीहरूको जीवनको मूल ध्येय नै राग बन्न पुग्छ । उनीहरूका निमित्त धन मरुभूमिको मृगको तृष्णाजस्तै कहिल्यै नमेटिने नशा बन्छ । मानिसको यस्तो मनसिकताले ऊ धनको लागि कुनै पनि नाता तोड्न र जोड्न पनि तयार हुन्छ । उसका निमित्त घातप्रतिघात सबै जायज बन्छ । यी सबै मनोवृत्तिले शिरदेखि पाउसम्म रोगन भएका नेता, मन्त्रीहरू कसरी निस्वार्थ बन्न सक्छन ? यस्ता प्रवृत्तिका नेता, कर्मचारीबाट देशको विकास, जनताको सेवाको कल्पना गर्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन । भाषणमा राष्ट्रवादको, देशभक्तिको, जनताको सेवाको कुरा गरेर नथाक्ने यी नेता, मन्त्रीहरूको जीवनशैलीले बताउँछ की यिनीहरू ढाँटुवा हुन । के सबै नेताहरू लुटेरा मात्र हुन ? यिनीहरुबाट अनुशासनको आशा गर्नु, मानवताको आशा गर्नु सब बेकार हो ? नेतामा असल संस्कारी कोही पनि छैनन् ? यस्तो पनि होइन । राष्ट्र र जनताप्रति वफादार नेताहरू पनि छन तर उनीहरू कुहिरोमा हराए जस्तै भएको पाइन्छ ।
मान्छेहरू विकृत बन्दै जानुमा अहिलेको समाजिक अवस्था पनि एउटा कारण हो । समाजमा धनीहरूकै चुरीफुरी चलेको छ । समाजले धनी र गरीबलाई व्यवहारमै फरक गर्छ । समाजमा मानसम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सबै धनीको पोल्टामा छ । धनीहरू चाडबाड, मेलापर्व, समाजका हरेक जमघटमा हैकम चलाउँछन् । हरेक ठाउँमा धनीहरूकै बोली बिक्ने भएको छ । समाजमा हुने गरेको धार्मिक, राजनीतिक, खेलकुद एवम् विकास निर्माण जस्तोसुकै कार्यक्रममा पनि मञ्चको अगाडिको पंक्ति धनीहरूकै लागि निर्धारित हुने गर्छ । धनीहरूले नै दोसल्ला ओढ्ने, ओढाउने काम गर्छन । समाजमा आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरू भने धनीहरूको लागि आसनको व्यवस्था गर्ने, बेन्च पुछ्ने, चिया पकाउने, सत्कार गर्नेसम्मको कार्य गर्छन् । समाजमा आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहने स्वाभिमानी नागरिकजसको आर्थिक हैसियत बलियो छैन, उनीहरूको निम्ति समाजको मञ्चको अवसर कहिल्यै आउँदैन । उनीहरू खादा दोसल्लाको लागि लायक हुँदैनन् । उनीहरूले सँधै हेला, अपमान नै सहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ । त्यस्ता अवसरमा एकाध व्यक्तिले कहिलेकाहीँ मौका पाउनु पनि युद्ध नै जितेजस्तो हुन्छ । कस्तो विडम्बना ! धन कसले कसरी कमायो भन्ने कुराको मतबल नभएर धन कमायो भने सफल भयो भनेर प्रशंसा गर्ने समाजको प्रवृत्ति छ । समाजमा सफलता असफलताको नापजाँच गर्ने आधार धन हुनथालेको वर्तमान अवस्थाको कारण सबैलाई पैसा नै चाहिएको छ । मानिसले जसरी पनि पैसा नै कमाउनु परेको छ । मानिसहरू पैसा बाहेक अरू सबै चिज गुमाउन तयार छन् ।
मानिसले पैसाको लागि के गर्ने ? के नगर्ने ? सोचमा जे पनि गर्दछ । उसले पढाई पनि पैसाकै निम्ति, सिप पनि पैसाकै निम्ति, जागीर, उद्योग, व्यापार, राजनीति, पेशा सबै नै पैसाकै निम्ति गर्ने गर्छ । मानिससँग पैसा छ भने नातागोता, इष्टमित्र, साथीभार्ई, आफन्त सबै आफ्ना हुन्छन भने पैसा नभएमा मान्छेहरूको भीडमा ऊ एक्लो हुन्छ । समाजको यहि विभेदपूर्ण संस्कारले मान्छेलाई विकृतितर्फ जान बाध्य पारेकोे छ । समाजमा गुण्डागर्दी, लुट, चोरी, ठगी, छलकपट, धनलोलुप संस्कृतिले जन्माएको हो । उद्योगपतिले चामलमा ढुङ्गा मिसाउन पनि पाउने, ब्यापारीले ठग्न पनि पाउने, घुस, कमिशनले त सामाजिक मान्यता नै पाएको जस्तो वर्तमान अवस्थामा झुठो पनि नौलो भएन, ढँटुवाले पनि इज्जत पाउने भयो । मानिसलाई यस्तै विकृतिले स्वार्थी बन्न बाध्य बनायो । नेपाली समाजमा राम्रा होइन हाम्रा, हाम्रामा पनि मेरा अनि मेरामा पनि नितान्त मेरो भन्ने चिन्तन विकसित भयो । मानिस यतिसम्म तल्लो स्तरको स्वार्थी बन्न पुगेको छ की राम्रा सबै मेरा, खराब सबै अरूका भन्न लागिसक्यो । मैले जे पनि गर्न पाईने, अरूले गर्नै नपाउने भन्ने चिन्तनले समाज भ्रष्ट भइसक्यो । समाजमा यस किसिमको गलत मनोदशाले बास गरिसकेको छ । अब हाम्रो समाजमा अनुशासन र संस्कार खोज्नु समुद्रमा हिरा खोज्नु बराबर हो । पैसा भएपछि सब चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर रमाउने अहंकारीहरूको समाजमा बिगबिगी छ । समाजमा मिठो निन्द्रा गुमाएर उच्चस्तरको ओछ्यानको व्यवस्था गर्न लागिपर्नेहरू पनि छन् । के यो ठिक हो त ? होइन बिल्कुलै होइन । यसले मान्छेलाई सन्तुष्टि दिन्छ ? बिल्कुलै दिँदैन् । यसले मानिसलाई आनन्दको निन्द्रा दिन्छ त ? बिल्कुलै दिँदैन । समाजमा पैसाले सब चिज पाउन सक्छ भन्नेहरूले त्यस्तो बजार पाउँदैनन् । जहाँ माया किन्न पाइयोस् । विश्वास बेचेको ठाउँमा आनन्द, सन्तुष्टि क्षणभरमा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धनले, साग र सिस्नु खाएर जिउनु आनन्दी मनले’ । के त्यसो भए धन कमाउने विचार नै गलत हो त ? समस्याको जड धन नै हो त ? धनबिना जीवन कसरी चल्ला त ? मेरो भनाईको अर्थ बिल्कुलै धन कमाउने सोचको विरुद्ध लक्षित हुँदै होइन । विद्वानहरूका अनुसार संसारमा मानिस तीन किसिमले बाँच्ने गर्छन्, राग, अन्तराग र बैराग । मेरो कुरा राग पनि गलत, बैराग पनि गलत मात्र अन्तरागमा बाँच्ने कोशिस गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो । रागमुक्त अवस्था अन्तराग हो । रागमाथि विजय प्राप्त गर्नु रागको अन्तको अवस्था हो । पैसा नै सबथोक हो, यो राग हो । पैसा केही होइन, यो बैराग हो । पैसा केही अवश्य हो भन्ने सोच अन्तराग हो । मेरो वकालत सन्तुलित धनको हो । श्रमको मूल्य बराबरको धनको हो । जीवनमा सुख पाउने आशामा दुःख गर्दागर्दै दुःखबाट मुक्त हुन नपाउँदै जीवनको अन्त हुन्छ । धेरै मानिसको जीवन यसरी नै बित्ने गर्छन । यही सत्यलाई आत्मासात गर्दै विद्वानहरूले भनेको हुनुपर्छ ‘सन्तुष्टि सदा सुखी, असन्तुष्टि सदा दुखी’ । सन्तुष्टलाई प्रगतिको बाधकको रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन । सन्तुष्ट मानिसले नयाँ चिज खोज्दै खोज्दैन, थप मेहनत गर्दै गर्दैन, अनि उसको कसरी उन्नति हुनसक्छ ? मानिसहरू सन्तुष्ट भएर बस्ने स्वभाव भैदिएको भए मानव सभ्यता यति विकसित हुने नै थिएन । मानिसहरू गहन तर्कहरू गर्छन् । धेरैलाई यस्तै लाग्दो होला, विचार गलत होइन तर बुझाई मात्र सतही भयो । सन्तुष्टिको अर्थ हात बाँधेर बस्ने भन्ने बिल्कुल होइन । मानिसको जुन समयमा जति क्षमता छ, त्यसैमा जीवनको व्यवस्थापन गर्न स्विकार गर्नुलाई सन्तुष्टि भनिएको हो । मानिसले आफ्नो क्षमता बढाउन सक्यो भने त्यहि अनुसार व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै मानिसको क्षमता घट्न पनि सक्छ, घट्यो भने पनि त्यहि अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्नुलाई नै सन्तुष्टि भनिएको हो । मानिसले आतिनु र मातिनु दुवै खराब कुरा हुन् । आफ्नो क्षमता बढ्यो भने मातिएर होस गुमाउने र क्षमता कमजोर भयो भने आतिएर होस गुमाउने प्रवृत्तिले जीवनमा सन्तुष्टि दिँदैन । यी दुवै प्रवृत्तिबाट जोगिनु नै सुखानुभूति हो । मानिस सन्तुष्टिको गहिराईलाई बुझ्न नसक्नुको कारण रागको बाटोमा हिँड्छन या निराश भएर बाँच्छन । जीवन दुवै परिस्थितिमा जीवन सन्तुष्ट हुन सक्दैन । त्यसैले जीवनको अन्तिम घडीमा धेरै मानिस रोएर संसार त्याग गर्छन् । मानिसको जीवनमा सबभन्दा कठिन समय भनेको उत्तरार्ध अथवा बुढेसकाल हो । जीवनको उत्तरार्धमा सोचेको जस्तो न आफ्नो शरीरले साथ दिन्छ न सन्तानले, न समाज न आफन्त, नितान्त एक्लोपना हुन्छ । मानिसले सुखको आशामा धनको पछि लागेर न अनुशासनको मतलब ग¥यो न संस्कारको नै वास्ता ग¥यो । उसले धनको लागि कुनै पनि बाँकी नराखेपछि त्यसको परिणाम जीवनको अन्तमा बेसहारा, निराशा र छट्पटी सिवाय अरू के हुन्छ र ? त्यसैले हामीले सन्तानलाई धनी होइन, संस्कारी बन्न सिकाउनुपर्छ, ज्ञानी बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । महापुरुषहरू भन्नुहुन्छ, संस्कार जस्तो अक्षय धन संसारमा अरू कुनै पनि छैन, ज्ञान नै उच्चत्तम धन हो भन्ने तथ्यलाई बुझाउनु पर्छ । यति गर्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो सन्तानले सार्थक जीवनको बाटो पक्रन सक्छन् । यस विषयमा एउटा काल्पनिक कथा जोडौँः
काठमाडौैँ उपत्यकाको काँठे नेवारी बस्तीमा श्रीमती राममाया र छोरो रामका साथ हरिचाको सानो परिवार थियो । राममाया असल गृहणी र रूप जस्तै शिष्ट र सरल पनि थिइन् । हरिचा र राममाया किसानी गर्थे । उनीहरूको भित्री इच्छा छोरालाई डाक्टर बनाउने थियो । उनीहरूले छोरालाई पैसा नलाग्ने सरकारी स्कुलमा नपढाएर राम्रो भनि नाम चलेको अंग्रेजी माध्यमको निजी स्कुलमा पढाए । उनीहरू दुई रोपनी जति खेत र आधा रोपनी जति पाखाबाली रहेको पुर्खौली सम्पत्तिमा खुबै मेहनतले काम गर्थे । उनीहरू छोराको पढाइमा असर नपरोस् भनेर उसलाई खेतीपातीका कुनै पनि काममा सहभागी गराउँदैनथे । हरिचाको परिवारलाई खेतीपातीबाट आठ, नौ महिना खानलाई पुग्थ्यो, बाँकी तीन, चार महिनाको लागि, सामाजिक व्यवहारको लागि अनि दश कक्षामा अध्ययनरत छोरोको महिनावारी शूल्क तिर्नको लागि पनि खेती बाहेक अन्य धन्दामा लाग्नु पर्ने बाध्यता थियो । हरिचा स्थानिय तेलमिलबाट तोरीको तेल लिएर शहरमा बिक्रीको लागि जाने गथ्र्यो । राममाया पनि फुर्सदको समयमा ऊनका पञ्चा, टोपी, स्विटर आदि बुन्ने काम गर्थिन् । फुर्सदको समयमा केही न केही गर्ने राममायाको स्वभाव नै थियो । हरिचाको परिवार कमाई पनि राम्रै भैरहेकोले खुसी नै थियो । कहिलेकाहीँ राममायाले कपडा बुन्दै गीत गुनगुनाउँदै सन्तुष्टिको परिचय दिन्थिन् । छरछिमेकीले पनि हरिचाको जोडीको खुलेरै प्रशंसा गर्थे । हरिचा फुर्सदको समयमा कहिलेकाहीँ चिया पसलतिर, कहिलेकाहीँ पाटीमा छरछिमेकीको गफमा पनि बस्ने गर्थे । त्यहाँ भएका मानिस कोही विदेशमा बसेका छोराछोरीको बयान गर्थे, कोही कमाईको कुरा गर्थे, कोही विदेशमा रहेका छोराछोरीेको प्रगतिको गफ सुनाउँथे । हरिचा पनि छोरालाई डाक्टर बनाउने इच्छा सुनाउँथे । उनले छोराको पढाई नबिग्रियोस् भनेर घरमा टेलिभिजन, इन्टरनेट अहिलेसम्म पनि नजोडेको भनेर आफ्नो बुद्धिमताको परिचय दिने कोशिस गर्थे । एकदिन बेलुकी आफूले गरेको गफको कुरा सम्झेर हरिचालाई ढिलासम्म निन्द्रा परेन । आफ्नो छोरालाई डाक्टर बनाउने र अमेरिका पठाउने अनि अमेरिका घुम्न जाने, छोराले धेरै पैसा कमाएपछि छाती फुलाएर छोराको गफ सुनाउने भनेर उनी मख्ख भए । राममायालाई लोग्नेको कुरा उचित लागेन र वर्तमानमै राम्रो गर्ने कोशिस गर्न सुझाव दिइन् अनि दुवै जना छोराको परीक्षाको विषयमा केन्द्रित हुन थाले । क्रमशः
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८, १२:२४:००